"Mandeha soa aman-tsara" amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Frankfurt: nohamafisin'ny TÜV Quality Seal
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » "Mandeha soa aman-tsara" amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Frankfurt: nohamafisin'ny TÜV Quality Seal
Janoary 26, 2021
Fepetra feno mba hiarovana amin'ny aretina azo ahitsy amin'ny toe-javatra mitohy amin'ny areti-mandringana any amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt
Ny "fivezivezena azo antoka" mandritra ny areti-mandringana dia mitohy amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) Izany dia nohamafisin'ny TÜV Hesse, izay nanitatra ny FRA farany teo Tombo-kase kalitaon'ny "azo antoka amin'ny Covid-19" mandritra ny enim-bolana hafa.
Ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia efa nahazo ny mari-pahaizana momba ny kalitaon'ny TÜV voalohany avy amin'ny fikambanana fitsapana Tüv Hesse tamin'ny Jolay 2020, manan-kery enim-bolana hatramin'ny Janoary 2021. Nanomboka teo dia nanatsara hatrany ny fepetra ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina Fraport mba hamaly ny fiarovana sy ny fahadiovan'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an'habakabaka ho valin'ny ny toe-javatra areti-mandoza mitohy. "Nampihatra ny tolo-kevitr'ireo mpanara-maso izahay, toy ny fanitarana ny fepetra fisorohana ny aretina amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpivarotra ambongadiny sy sakafo sy zava-pisotro ao amin'ny seranam-piaramanidina," hoy i Thomas Kirner, lehiben'ny serivisy mpandeha ao amin'ny Fraport AG.
Nandritra ny andro maromaro, ny ekipan'ny TÜV Hesse dia nanadihady indray ny fizotry ny dia an-dalamby nataon'ny mpandeha tao amin'ny FRA - ary koa nanamarina ny fepetra noraisina nanerana ireo terminal mba hiarovana ireo miasa amin'ny seranam-piaramanidina. Nankasitraka ny fepetra fidiovana lehibe, ny fifandraisana lalina amin'ireo vondrona kendrena ary ny fiomanana tsara sy ny fiarovana ny mpiasa ny auditors. “Ny mpiasanay dia zarina tsy tapaka amin'ny fifampiraharahana amin'ny mpandeha, ao anatin'izany ny fomba hampahatsiahivana azy ireo amin'ny fomba feno fanajana ny fepetra takiana amin'ny fahadiovan'ny Covid-19. Ny zava-dehibe dia ny fandraisan'ny tsirairay andraikitra sy ny fanarahana ny lalàna - izay ilaina amin'ny fiarovana ny tenantsika sy ny hafa, "hoy i Kirner.
Ny Airport Council International (ACI), ny fikambanan'ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina manerantany, dia nanaiky ihany koa ny seranam-piaramanidina Frankfurt noho ny fihetsika fakan-tahaka nataony hiadiana amin'ny virus. Tamin'ny faran'ny taona 2020, ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia nahazo ny "ACI Accreditation momba ny fahasalamana amin'ny seranam-piaramanidina" nandritra ny taona iray. Izany no mahatonga ny FRA ho iray amin'ireo seranam-piaramanidina alemana voalohany voamarina fa mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny fahadiovana sy ny viriosy.
Fepetra takiana amin'ny sarontava miaro ny orona
Tamin'ny 23 Janoary 2021, namoaka fepetra vaovao ny manampahefana amin'ny governemanta momba ny fanaovana saron-tava miaro ao anaty terminal any amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt - saron-tava fitsaboana sy kilasy FFP2 voasokajy ihany no avela ankehitriny. Tsy ampy intsony ny firakofana lamba. Misy topy maso momba ny fivarotana seranam-piaramanidina manolotra saron-tava fiarovana ilaina Eto.
Fampahalalana marobe mifandraika amin'ny fepetra fiarovana, fitondran-tena mety ary torohevitra mahasoa hafa ho an'ny mpandeha no havaozin'i Fraport isan'andro www.fjkm-airport.com tranokala. Manoro hevitra mafy ireo mpandeha mba hijery izany vaovao izany alohan'ny hanombohan'ny diany.
46% n'ny mpivezivezy atsinanana atsinanana mikasa ny hiala sasatra any ivelany amin'ny 2021
Iza amin'ireo tanàn-dehibe amerikana no manana ny maha-izy azy indrindra, mendri-kaja indrindra ary be pitsiny indrindra?
Vaovao momba ny dia any Suède
Amin'ny tranga voalohany 1 tapitrisa, manontany tena i Suède hoe inona no tsy nety tamin'ny 'paikadiny COVID'
13 ora lasa izay